Ishaqekile i-PGA ngowe-EFF ohlasele intatheli ePhalamende | News24
Ishaqekile i-PGA ngowe-EFF ohlasele intatheli ePhalamende
Cape Town - IParliamentary Press Gallery Association ithi ishaqekile ngokuhlaselwa kwentatheli ePhalamende ihlaselwa yiLungu lePhalamende eliphinde libe yiSekela likaMengameli we-EFF, uFloyd Shivambu ngoLwesibili ekuseni.
U-Adrian de Kock, oyintatheli esebenza ngokushutha izithombe eNetwerk24, iklinyiwe yaphinde yashawa ebusweni ngesikhathi isondela kuShivambu icela ukuzwa uvo lwakhe ngodaba lweMeya yaseKapa uPatricia de Lille.
Ukuqondiswa izigwegwe kukaDe Lille bekubanjelwe ePhalamende namhlanje.
OLUNYE UDABA:BUKA: Owe-EFF ehlasela intatheli
UDe Kock, uthi uye kuShivambu ngenhloso yokuzwa ukuphawula kwakhe ngodaba lukaDe Lille kodwa waphushelwa eceleni.
Kube sekuqubuka ingxabano phakathi kukaDeKock noShivambu okuthe ngemuva kwesikhashana wabonakala esehamba ngesikhathi sekuqhamuka ezinye izintatheli wayongena ngaphakathi ephalamende.
USihlalo we-PGA u-Andiswa Makinana uthe isigameko siqoshiwe kanti uDe Kock unelungelo lokuba amangalele uShivambu nomngani wakhe.
"Noma ngabe iyiphi intatheli esebenza ePhalamende nanoma yikuphu, inelungelo lokushutha izithombe iphinde ibuze nemibuzo kunoma ngubani omele umphakathi. Besingekho isidingo sokuba uShivambu ashaye uDe Kock.
"I-PGA izobhalela uSomlomo wePhalamende, uSihlalo we-NCOP ne-Economic Freedom Fighter (EFF) incwadi, icela ukuba uShivambu axolise noma yena nomngani wakhe bathathelwe izinyathelo," kusho uMakinana.
53% - 9258 votes